Home Wararka Safarka Rooble ee Garbahaareey oo qarka u saaray fashil & Faragalinta...
Safarka Rooble ee Garbahaareey oo qarka u saaray fashil & Faragalinta Farmaajo
RW Maxamed Xuseen Rooble waxa uu xalay kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka ee degmada Garbahaarey. Rooble iyo waqfigiisa ayaa marka hore ka dhageystay warbixin ku aadan xaaladda Goblka Gedo iyo sida looga gudbi karo khilaafaadka xoogan ee ka jira halkaas, maadaama la galayo doorasho.
Ujeedada safarka Rooble ee Garbahaareey ayaa ahayd in xal degdeg ah laga gaaro dadaallada dib u heshiisiinta ee ay xukuumaddiisa ka bilaabeyo gobolka Gedo iyo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan soo xulista kuraasta labada aqal ee taalla magaaladaasi. Rooble oo dhankiisa wata amar uu siisay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee ahaa in isaga magacaabo gudoomiyaha cusub ee Garbahaareey ayaa durbadiiba caqabad kala kulmay waxgaradka reer Gedo.
Waxgaradka Gedo ayaa u sheegay RW Rooble in aan shacabka reer Gedo loo gacan galin waxa ay ku sheegeen ” Gacan ku dhiigle Axmad Madoobe”. Taas oo ay uga digayaan in Rooble la yimaado Gedo go’aano uu ka sooqaatay Axmad Madoobe, laguna qasbo shacabka reer Gedo in ay aqbalaan. Waxa la rumeysan yahay in fakarkaas uu yahay mid ka yimid Farmaajo.
Kulamada uu Rooble ka qaybgalayo waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Ugaas Maxamed Ugaas Haashi Ugaas Xirsi, kaas oo wakiil u ah Farmaajo. Waxaana muuqata in Ugaaska ku shaqeeynayo rabitaanka gaarka ah ee Farmaajo. Waxa jira caqabada badan oo horyaalo Rooble, su’aashu waxa ay tahay ma ka badbaadi doonaa fashilka uu Farmaajo la damacsan yahay?